Gufw: isa yakareruka Firewall pane yako Ubuntu | Linux Vakapindwa muropa
Iyo firewall ndiyo sisitimu iyo inogona kuitiswa mune zvese software uye Hardware uye inoitirwa kuchengetedzeka. Mukati medu isu tiri kutaura nezve software inonzi Gufw uye inoshanda seye firewall yedu yeLinux based system. Iyo firewall kana firewall, yeiyo shoma mumunda, yakanyanya kunge sevashandi vekuchengetedza kana mushambadzi, iyo inongopinza mukati chete inodiwa traffic uye inovhara imwe isiri yekufarira.
Nenzira iyi, imwe traffic isingadiwe inogona kuvharwa, tichiparadzanisa michina yedu kubva kunetiweki kuti igare yakachengeteka. Izvi zvinoreva kuti haina kuburitswa munjodzi dzakawanda, asi haisi nzira isingakanganisi, saka usakanganwe kushandisa njere, shandisa mapassword akasimba, uzvidzivirire kubva kune zvimwe zvinotyisidzira uye chengetedza software kuti ivandudzwe kudzivirira njodzi dzinogona kushandiswa nematsotsi. vanoda kuwana komputa yako.
Kunyange zvakadaro muLinux pane zvakawanda zvingasarudzwa Kuchengeta iyo system ichidzivirirwa uye kushandisa Firewall kana firewall, dzimwe nguva kushandisa mamwe maturusi anogona kunge akaomarara kune vashandisi vasina ruzivo rwakakwira. Nekudaro, zvishandiso zvatinazvo zvine simba kwazvo uye zvinotitendera kuti tiite zvisingaite zvinhu, asi kune avo vanoda chimwe chinhu chiri nyore uye nekukurumidza, vanogona kushandisa Gufw. Iyo zvakare yemahara, yemahara uye zvinoenderana nevagadziri vayo, ndiyo firewall inoitwa nenzira yakapusa pasi ...
Iyo ine yakajeka kwazvo graphical interface, saka Gufw (muchokwadi iri graphical interface yeiyo ufw chirongwa) haizokukonzere iwe musoro. Ingoimisikidza nekuimisikidza, uye kunyangwe isiri iyo yakanakisa firewall mupasi, chimwe chinhu chiri nani kupfuura chero chinhu. Nekudaro, inobatanidza sarudzo dzepamberi dzinogona kubatika kuitira kumwezve kugadziridzwa kwesarudzo. Asi ngatiendei kune nyonganiso kuiisa pane Ubuntu:
Iwe unogona zvakare kuiisa kubva kuSynaptic kutsvaga zita rake kana iwe uchiona zviri nyore. Ipapo iwe unokwanisa kuwana iyo Sisitimu Kugadziriswa, Sisitimu, Dhairekitori uye Firewall Kugadziriswa kuti ikwanise iyo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Gufw: gadza yakapusa Firewall pane yako Ubuntu
Nhanganyaya kuIPTABLES: gadzira Firewall paLinux